Mogadishu Journal » 2018 » November » 19
Diyaarad duqeyneysa deegaan ka tirsan Gobolka Mudug
Mjournal :-Wararkaka imanaya deegaanka Maamiye oo u dhaxeeya Camaara iyo Caad ee degmada Xarardheere gobolka Mudug ayaa sheegaya in diyaarad dagaal ay halkaasi duqeyn ka wado. Wararka ayaa intaas ku daraaya in duqeynta ay diyaarada deegaankaasi ka bilaawday orax dhacii galabta...
Mjournal :-Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wax is daba marin ku eedeeyay hey’addaha dowladda iyo Gobolka Banaadir. Warbixin Guddiga Maaliyadda soo saaray oo maanta loo qeybiyay Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa lagu soo bandhigay...
The terrorist group Al-Shabaab still remains a real security threat to Kenyan and East African security agencies, according to the latest report by the UN Monitoring Group. It warns of pitfalls that cloud concerned states’ commitment to rid not only Somalia but also its...
Prime Minister Abiy Ahmed met Djibouti President Ismaïl Omar Guelleh on the sidelines of the 11th African Union Extraordinary Summit in Addis Ababa. The two horn of Africa leaders discussed bilateral and regional issues. According to ENA report, the President of Djibouti praised...
Mjournal :-Dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidanka maamulka Galmudug iyo Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka socdaa degaanka Dhagaxyaale oo 50 KM u jira Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud sidda ay warbaahinta u xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Dagaalka ayaa yimid...
Mjournal :-Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay inuu u soo gaba-gaboobay shir Madaxeedkii Midowga Afrika oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay kaga qeyb galeen magaalada Adis-ababa ee dalka Ethiopia. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Talyaaniga. Madaxweynaha iyo madaxda dalka Talyaaniga ayaa ka wada hadli...
Trump” Codka Khashoqji Waa duubid laga sameeyay sakaraad”
Mjournal :-Donald Trump Madaxweynaha Maraykanka ayaa shaaciyay in lala wadaagay xog ku saabsan cod laga duubay dilkii Jamal Khashoqji oo ahaa saxafi Sacuudiga u dhashay, balse wuxuu sheegay in isagu uusan si shaqsi ah u dhagaysan doonin. Waxaa uu sheegay Trump in falkaasi uu...
Mjournal :-Wafdi Ballaaran oo uu hoggaaminaayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta ku wajahan Magaalada Roma ee Caasimadda dalka Talyaaniga sidda ay xaqiijiyeen ilo ku sugan Madaxtooyadda. Wafdiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah xildhibaano,...
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay Khilaafka DFS iyo D/goboleedyadda
Mjournal :-Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe ee Soomaaliya in aysan tanaasul u muujinin maamul goboleedyadda markii uu yimid Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda. Waxaa uu sheegay in dib dhac weyn uu dalka ku...